I-Instagram Tipps enhle kakhulu Wie Kunden Ihre Marke Lieben - Semalt Perspektive
Kukhona iphutha elingalungile mayelana ne-Instagram ukuthi abanye abantu bhizinisi kumele baqede. Ubani oshilo ukuthi isiteji sezokuxhumana sabantu kuphela 'sokuthunyelwa kwabantu abasha' izithombe namavidiyo afanayo? Isikhathi sokubuka i-Instagram ngokukhanya okusha: ngokunyuka okungakaze kwenzeke ekukhangiseni kwezokuxhumana, akukho okumele kuthathwe ngengozi.
Ngamanye amazwi, isu elilungile ku-Instagram lingakhuphula umkhiqizo wakho.
Izinombolo zingamanga - abat jour cubi rubik paga con paypal. Instagram ithatha kancane kancane njengenkosi yezokuxhumana. Ngokusho kukaScott Galloway (uprofesa wokuthengisa, i-NYU stern), i-Instagram ine-50x ngaphezulu yokubandakanya izinga kune-Facebook ne-20x ye-Twitter. Lo nyaka (2017), 51,8% wabathandi bezokuxhumana bezenhlalo bazoba nge-Instagram okwenza okokuqala ukuthi uwele uphawu lwe-50%. Ungashiywe ngemuva, wengeze kulo mkhuba omusha.
Ukuze uqalise, sebenzisa lezi zeluleko ezingu-6 ezichazwe nguFrank Abagnale, iMenenja Yokuphumelela Kwamakhasimende Semalt Amasevisi Wezindiza.
1. Yenza ngcono i-bio yakho
Qala ngokungeza i-bio ekhangayo ne-Link Bitly kuwebhusayithi yakho esemthethweni. Qaphela ukuthi ku-bio yakho kuphela ongayengeza lesi sixhumanisi. Lesi sixhumanisi esithi "Like2Buy" sizoqondisa amaklayenti atholakalayo ekhasini lokufika nayo yonke imininingwane yomkhiqizo - izithombe, amanani, ukuhlolwa, njll.
2. Linganisa okuqukethwe 'kokudla'
Gwema ukuthengisa okunzima. Akuhambisani kahle nezilaleli zakho. Okuqukethwe kwakho kufanele kube ukuxuba kokuthunyelwe okuthunyelwe, ulwazi oluthile lomkhiqizo kanye nezinhlinzeko / iziphakamiso. Abathengi babika ithonya elinamandla emithonjeni yezenhlalo uma becabanga ukuthenga okuthile..Kuzo zonke izimo, ithonya lenombolo laliyizakhamuzi zomphakathi zabangane. Okwesibili emgqeni kwafika imithombo yezenhlalo yomphakathi (lapho ufika khona) ku-38%. Omunye u-35% usho ukuthi uthonywe yiziphi abathengisi ababengashoyo ku-Instagram. Thatha isibonelo sikaNike ne-Adidas - ngo-2014, i-Nike yathumela okuqukethwe okungu-60% okusekelwe endleleni yokuphila yabantu ngenkathi i-Adidas yenza u-32%. Ukholwe noma cha, u-Nike uthole ukuxhumana okungaphezulu kuka-8x kune-Adidas.
3. AmaHashtag abala
Yakha umbono ohlukile womkhiqizo wakho. Sebenzisa izithombe ezithokozisayo nezijabulisayo kanye namavidiyo ukuze ulalele izithameli zakho. Sebenzisa ama-hashtag ahamba phambili ukuthola ukutholakala okuningi. Kungaba ngumsebenzi onzima, kodwa kufanele ufunde indlela yokuphuma.
4. Gcina ithrekhi yokubandakanyeka kwezilaleli
Kunamanye amathuluzi ongawasebenzisa ukugcina ithrekhi yezinombolo. Isihluthulelo, okulula nje, iconconquare namanye amathuluzi wokuhlaziya kuzokusiza ukuba ulingane nokufinyelela kokuthunyelwe ngalunye nokubandakanya kwawo. Vele uqinisekise ukuthi uqhuba ukucinga okuphelele ngamagama angukhiye ukuze uthole ukubandakanyeka okwengeziwe. Akukulimazi ukuthola ezinye izinhlobo usebenzisa i-hashtag efanayo.
5. Qinisekisa emkhakheni wezinkulungwane zeminyaka
Izinkulungwane zeminyaka zithanda nje i-Instagram. Umkhiqizo wakho kufanele uxhumane nengxenye yezinkulungwane zeminyaka ngemuva kwalokho abangakwazi ukusakaza igama ngokusebenzisa izithombe / amavidiyo abiwe. Izindaba zezindaba zithandwa kakhulu ngakho kungani ungacabangi ngokuhlekisa izethameli noma ukuzinikezela ngezinsuku ezilodwa.
6. Kuthiwani ngenxusa lomthengisi?
Uma unebhajethi futhi uzothola umthonya, yiya phambili futhi uyenze. Ngenkathi ukhona, qiniseka ukuthi iphrofayili yabo ihlanzekile futhi unezinto ezinkulu ezilandelayo. Ungashiyi ukuhlehla ngemuva. Muva nje ucwaningo luhlolisise izikhala eziyizigidi ezivela emakethe angu-800 ahlukene. Yilokho abathola khona - 92% bathathe i-Instagram lapho behambisa khona ama-post angu-15 ngesonto. Joyina i-bandwagon.